Tsy hisoronako e!! - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Raha niteny momba ny BRGM tany Frantsa ianao andriamatoa filoha dia nanaitra ahy tanteraka ny nilazanao fa niandry izay Filoha azony hatokisana tsara ny Frantsay vao nanome ireo lisitry ny harena ankibon’ny tany misy eto Madagasikara, sao mba hoe izay filoha mora ambakaina indrindra ary no tena tianao ambara ??!!! fiteninao matetika koa ny hoe hanao mihoatra ny vitan’ireo mpitondra rehetra tao anatin’ny izay lasa izay !!! Tsy ho voatanisa eto anefa izany rehetra izany raha hotantaraina anao daholo izy rehetra ary asa raha tena hahavita betsaka mihoatra ianao na tsia !!ny tiako holazaina dia aoka re ho Filoha manana fanetren-tena fa tsy ho filoha matin-kambo fotsiny e!! samy manana ny nampiavaka azy ianareo nitondra ireo fa tanteraho ny programan’asanao fa aza mitady 19 amin’ny mpitazana sy ny vahoaka amin’izany !!! rehefa vitanao ireo nampanantenanao dia tsaroana hoazy ianao !! aoka izay ny teny maro !!
Tsy hiteny izay lasanao akory aho na izay fikafika nahatonga anao teo ! Tsy adala ny olona fa samy vavolombelona, tantara izany ka tsy hadino, ianao moa efa eo rahateo ka atao akory, fa ny tiako tsindrina dia izao : “kondane” tsy maintsy mivoaka sary ianao amin’io fitondranao anay izao io raha tsy tianao ny hilanja kapoka mafy sy faharatsiana tanteraka, satria manko día nampiasa ity fomba mamohehitra rehetra ity ianao hahazoana fitondrana ary mba hahazoana fahefana ka dia miandry izahay mba ho tena fitiavan-tanindrazana tokoa no nanaovanao izany.
Inona moa Prezida raha vitanao tahaka an’i Miami aza Toamasina, na ho vitanao misy autoroute mifanongoa aza Ampasika, na ho vitanao toy ilay EPP tao Toamasina daholo aza ny EPP rehetra, na hisy koptera roapolo aza eto, na mbola hanorina rova fanindroany aza ianao, na hataonao tahaka ny Stade Barnabeo aza i Mahamasina kanefa ny vahoakanao mbola miady mafy hahita vola hividianana vary mora telo kilao, asa fa toa ny akoho aza hono tsy tia an’ilay izy, ny sasany aza tsy mahatakatra, ny matin’ny hanoanana sy ny aretina moa isan’andro nataon’ny Mpahary misy foana, ny vahoakanao ato mbola matimaty hoazy tsy misy mpiaro, ny ankamaroany mitakiky amin’ny haizina , ny maro tsy afa miasa, ny manana handevozin’ny tremalahy !
Mba izay tena mipaka any amin’ny vahoaka mivantana re hatao aloha fa mandeha hoazy anie ny ambiny raha toa ka any amin’ireo Malagasy tsy mandady harona izay 90% no laharampahamehana e ! Raha tena hafantokao any mantsy ny asa rehetra mety tsy hadino ianao a ! Aza hialana bala ny maharary ny vahoaka fa izay no tena handonana anao mafy eto. Raha izaho izao ianao a, haompako any amin’ny fanatsarana ireo hopitaly manarapenitra rehetra sy hampitaovana azy ireo tsara aloha ny vola, hataoko izay hahafahan’ny Malagasy mitsabo tena faran’izay mora, maninona moa raha gratos, rehefa salama ny mponina afaka mitady. Haparitaho any amin’ny toerana mamay rehetra eny ireo miaramila fa na hiantoan’ny olona aza anie ny sakafony rahefa afa-po ny olona malala tanàna e ! Mazoto mamokatra rehefa milamina. Hataoko vaindohan-draharaha ny fanaovana ny lalana mankany amin’ireo toerana malaza eto amintsika, na ny eto antoerana aza anie mahavita mitsangatsangana any rehefa tsara ny lalana e, mainka moa ny vahiny, “exploiter-na à fond” ireo tanana mahasarika vahiny, hamporisiho ry Ravatomanga sy ireo mpanambola eto hanangana hotely 5 étoiles any ka na goudron nylon aza ny mankany tsy quoi, toy izany koa ny famoahana ny vokatra rehetra. Ezahana ary handaniana vola ny mba haha 100% ny fidiran’ny hetra fa tsy 30% tahaka izao, ny rano sotroina koa mba hiantohana. Ezahana raha azo hatao ny hampahaleotena ny volantsika fa tsy voafehin’ny any ivelany. Aleo hangarahara ny fitsarana. Ataovy izay hiverenan’ireo orin’asa afakaba fa be ny asa raha betsaka izireo.
Hofintiniko. Rehefa salama ny vahoaka ka milamina ny tany dia mazoto mitady ny olona “donko” mahita harapaka foana dia tsy mangalatra na ho lasa dahalo. Ny Malagasy anie “midemerda” tsisy tahaka izany e!! dia mba ianao humble fa tsy poerapoera karanio !!! raha ireo no vitanao mety hadino ny laza ratsinao an !!! Fa tsy izao zavatra tsy azo hoanina rehetra izao no aseho !!
Ireo amiko ny laharam-pahamehana ary minoa ahy fa raha mirona amin’ireo toi an tsy adala izahay!!